1. Maxaa sababa heerka gulukooska dhiigga ee sarreeya?
Waxyaabo badan ayaa sababi kara heerka gulukooska dhiigga ee sarreeya, laakiin waxa aan cunno ayaa ka ciyaara doorka ugu weyn uguna toosan ee kor u qaadista sonkorta dhiigga. Markaan cunno karbohaydraytyada, jidhkeenu wuxuu u beddelaa karbohaydraytyadaas gulukoos, tanina waxay door ka ciyaari kartaa kor u qaadista sonkorta dhiigga. Borotiinka, ilaa xad, xaddi badan ayaa sidoo kale kor u qaadi kara heerarka sonkorta dhiigga. Dufanku ma kiciyo heerarka sonkorta dhiigga. Cadaadiska keena kororka hormoonka cortisol wuxuu kaloo kor u qaadi karaa heerarka sonkorta dhiigga.
2. Waa maxay farqiga u dhexeeya nooca 1 iyo nooca 2 ee sonkorowga?
Diabetes Nooca 1aad ee sonkorowga waa xaalad is -difaaca jirka oo keenta in jidhku awoodi waayo inuu soo saaro insulinta. Dadka qaba sonkorowga Nooca 1 waa inay ku jiraan insulinta si ay u ilaaliyaan heerarka gulukooska xadka caadiga ah. Nooca 2aad ee sonkorowgu waa cudur uu jidhku awood u leeyahay inuu soo saaro insulinta laakiin uusan awoodin inuu soo saaro wax ku filan ama jidhku aanu ka jawaabin insulinta la soo saarayo.
3. Sideen ku ogaanayaa inaan qabo sonkorow?
sonkorowga siyaabo dhowr ah ayaa lagu ogaan karaa. Kuwaas waxaa ka mid ah gulukooska soonka ee> ama = 126 mg/dL ama 7mmol/L, haemoglobin a1c oo ah 6.5% ama ka weyn, ama gulukoos sare oo ku jira baaritaanka dulqaadka gulukoosta afka (OGTT). Intaa waxaa dheer, gulukoos aan kala sooc lahayn> 200 ayaa soo jeedinaya sonkorowga.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira calaamado iyo astaamo badan oo tilmaamaya sonkorowga waana inay kaa dhigaan inaad ka fikirto inaad iska qaaddo baaritaanka dhiigga. Kuwaas waxaa ka mid ah harraad xad -dhaaf ah, kaadida oo soo noqnoqota, aragga oo xumaada, kabuubyo ama xinjirro xagjirnimo, miisaanka oo kordha iyo daal. Astaamaha kale ee suurtagalka ah waxaa ka mid ah cillad kacsiga ragga iyo caadada aan caadiga ahayn ee dumarka.
4. Immisa jeer ayaad u baahan tahay inaad tijaabiso gulukooska dhiigga?
Inta jeer ee aad tijaabin lahayd dhiiggaaga waxay ku xirnaan doontaa dawaynta aad ku jirto iyo sidoo kale duruufaha shaqsiyeed. Tilmaamaha NICE ee 2015 waxay ku talinayaan in dadka qaba sonkorowga nooca 1 ay tijaabiyaan gulukooska dhiigga ugu yaraan 4 jeer maalintii, oo ay ku jiraan cuntada ka hor iyo ka hor sariirta.
5. Waa maxay heerka gulukooska caadiga ah?
Weydii daryeelkaaga caafimaad inuu bixiyo waxa kuu habboon cabirka sonkorta dhiigga, halka ACCUGENCE ay kaa caawin karto dejinta kala -duwanaanta leh tilmaamteeda Range. Dhakhtarkaagu wuxuu dejin doonaa natiijooyinka baaritaanka sonkorta dhiigga ee bartilmaameedka ku salaysan dhowr arrimood, oo ay ka mid yihiin:
● Nooca iyo darnaanta sonkorowga
● Intee in le'eg ayaad sonkorow qabtey
Status Xaaladda uurka
Presence Jiritaanka dhibaatooyinka sonkorowga
Health Caafimaadka guud iyo jiritaanka xaalado caafimaad oo kale
Ururka Sonkorowga Mareykanka (ADA) guud ahaan wuxuu ku talinayaa heerarka sonkorta dhiigga ee la beegsanayo ee soo socda:
Inta u dhaxaysa 80 iyo 130 milligram per deciliter (mg/dL) ama 4.4 ilaa 7.2 millimoles halkii litir (mmol/L) cuntada ka hor
Wax ka yar 180 mg/dL (10.0 mmol/L) laba saacadood cuntada ka dib
Laakiin ADA waxay xuseysaa in hadafyadan ay inta badan kala duwan yihiin iyadoo ku xiran da'daada iyo caafimaadkaaga shaqsiyeed waana inay ahaadaan kuwo shaqsi ahaan loo sameeyo.
6. Waa Maxay Ketones?
Ketones waa kiimikooyin laga sameeyay beerkaaga, sida caadiga ah jawaabcelin dheef -shiid kiimikaad ku jirta ketosis -ka cuntada. Taas macnaheedu waa inaad samaysato ketones marka aadan haysan gulukoos (ama sonkor) kugu filan oo aad ku beddesho tamar. Marka jirkaagu dareemo inaad u baahan tahay beddelka sonkorta, wuxuu u beddelaa baruurta ketones.
Heerarka ketone -ku waxay noqon karaan meel kasta eber ilaa 3 ama ka sareeya., Waxaana lagu cabiraa millimoles halkii litir (mmol/L). Hoos waxaa ku yaal safafka guud, laakiin maskaxda ku hay in natiijooyinka imtixaanku ay kala duwanaan karaan, iyada oo ku xidhan cuntadaada, heerka dhaqdhaqaaqa, iyo muddada aad ku jirtay ketosis.
7. Waa maxay ketoacidosis sonkorowga （DKA）?
Ketoacidosis sonkorowga (ama DKA) waa xaalad caafimaad oo halis ah oo ka dhalan karta ketones aad u sarreeya oo dhiigga ku jira. Haddii aan la aqoonsan oo aan la daweyn isla markiiba, markaa waxay u horseedi kartaa miyir -beel ama xitaa dhimasho.
Xaaladdani waxay dhacdaa marka unugyada jidhku awoodi waayaan inay gulukoos u isticmaalaan tamar, oo jidhku bilaabo inuu dufanka u jajabiyo tamar halkii. Ketones waxaa la soo saaraa marka jidhku jabiyo dufanka, oo ketones aad u sarreeya ayaa dhiigga ka dhigi kara mid aad u acidic ah. Tani waa sababta baaritaanka Ketone uu aad muhiim u yahay.
8. Ketones iyo Cuntada
Markay u soo degto heerka saxda ah ee ketosis nafaqada iyo ketones ee jirka, cunno ketogenic habboon ayaa muhiim ah. Dadka intooda badan, taasi micnaheedu waa cunista inta u dhaxaysa 20-50 garaam oo karbohidrat ah maalintii. Intee in le'eg oo nafaqo -yaqaanka kasta (oo ay ku jiraan karbohaydraytyada) aad u baahan tahay inaad isticmaasho way kala duwanaan doontaa, markaa waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho kalkuleetarka keto ama aad si fudud ula hadasho bixiyahaaga daryeelka caafimaadka si aad u ogaato baahiyahaaga makro ee saxda ah.
9. Waa maxay Uric acid?
Uric Acid waa badeecada qashinka jirka ee caadiga ah. Waxay samaysmaysaa marka kiimikooyinka la yiraahdo purines ay burburaan. Purines waa walax dabiici ah oo laga helo jirka. Waxa kale oo laga helaa cuntooyin badan sida beerka, kalluunka qolofta leh, iyo aalkolada.
Feejignaanta sare ee uric acid ee dhiigga ayaa aakhirka u rogi doonta aashitada crystals urate, taas oo markaa ku ururi karta agagaarka kala -goysyada iyo unugyada jilicsan. Kaydadka kiristaalo urate-u-eg sida irbad ayaa ka mas'uul ah bararka iyo astaamaha xanuunka leh ee gout.
Qalabka Baaritaanka Sonkorta Dhiigga ee Bilaashka ah, Mashiinka Hubinta Sonkorta Shirkadda ugu Fiican, Pneumotachograph Spirometer, Soonka Sonkorta Dhiigga 100, 5.2 Sonkorta Dhiigga, Mashiinka Baaritaanka Sonkorta Dhiigga,